Ukuhamba ngenqanawa eyiNkunzi yaseNewport, iRingwharf iyonke iYunithi
Indawo yam ikufutshane neeNyathelo kude neZiko leLali, imisebenzi yosapho, ubomi basebusuku, kumbindi wesixeko. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa ye-Hearrrt ye-Village, iivenkile, indawo yokudlela yasemanzini, zonke zingaphakathi kwinqanaba. Ulwandle olungaphantsi kweemayile ezikude, iiPaki, njl njl, i-ambience, abantu, ubumelwane. Indawo yam ilungile kubatshati, abahambi bebodwa, abahambi beshishini, iintsapho (kunye nabantwana), kunye namaqela amakhulu.
Ukungena ngo-4pm kwidesika engaphambili. Abasebenzi baya kunika izitshixo zegumbi kunye nepasi yokupaka isithuthi esinye
NCEDA UQAPHELE: Umntu obhala nge-Air BNB ligama elikuloo ndawo ebekelwe kwaye ugunyaziswe ukuba ajonge kwidesika engaphambili ngaphandle kokuba undazise ingaphelanga iyure enye yokubhukisha okwamkelweyo. Naluphi na utshintsho lwegama leendwendwe lufuna umrhumo we-129.00 yeedola
• Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide eWyndham ifuna ubuncinci beminyaka yokurenta engama-21.
• Idiphozithi yekhadi lokuthenga ngetyala (swayipha) iya kufuneka xa ujonga idiphozithi yomonakalo
Umthengi uyavuma ukwamkela iyunithi eyabelwe yiWyndham Front Desk Staff kwaye uyavuma ukuba impahla kunye neyunithi yokujonga ingohluka kancinci kwiifoto.
Abasebenzi baseWyndham baya kukubulisa kwindawo yokungena/yoBhaliso kwaye bakujonge ngaphakathi nangaphandle kwaye bakunike ulwazi oluluncedo malunga nemisebenzi kunye nezinto ezinomtsalane kwindawo leyo. Ungabhalisa kwangaphambili ukuba ufika kwangethuba. kwaye baya kuthatha inombolo yakho yeselula kwaye bakufowunele xa igumbi selilungile. Uyakunikwa imvume yokupaka imoto enye kwiyunithi nganye. . Ungagcina imithwalo kwindawo ukuba ufika phambi kokuba ungene. Ukuba unemoto eyongezelelweyo, kukho iNewport Gateway Transportation Centre ebekwe emva kwendawo ekuchithelwa kuyo iholide, eyenza ukupaka ngobusuku ngomrhumo, okanye iCaseys Marina ngapha kwendlela nayo yenza ubusuku bonke. Indawo yokupaka ezitalatweni emva kwentsimbi yesi-9pm isimahla
Izinto eziluncedo: INkqubo yeMisebenzi eQuquzelelweyo yePhulo lokuqubha Ngaphakathi & Nangaphandle Ibhayibhayi eshushu eshushu Ithiyetha yeSauna yaNgaphandle yokuQubha Izixhobo zoMdlalo Igumbi lePikniki/Indawo yeBBQ yokuHlamba Impahla ye-WiFi yaMahala Izabelo ze-WiFi zenziwa ngexesha lokungena. Iiyunithi zeWaterview zilinganiselwe. Akukho siqinisekiso seyunithi yokujonga amanzi. Le ndawo yokuphumla ibekwe ngaphaya kwesitalato ukusuka eZibukweni.
Iivenkile zasedolophini zihamba umgama ukusuka kwindawo yokuphumla. Ii-Pedi Cabs ziyafumaneka...akukho ntlawulo...Ngamacebiso nje.
NCEDA UQAPHELE: Umntu obhala nge-Air BNB ligama elikul…